Waa maxay xogta tixraaca ee sida loo doorto miirayaasha warshadaha-Warshadaha Wararka-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Waa maxay xogta tixraaca ee sida loo doorto miirayaasha warshadaha
Waqtiga: 2021-07-28 Hits: 6
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la horumarinayo warshadaha noolaha, sifeynta iyo qalabka kala soocista sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay, waxayna u dhaqaaqeysaa horumar ballaaran oo iswada. Soo bixitaanka iyo horumarinta qalabka sifeynta iyo qalabka kala soocida ayaa sidoo kale lagu sameeyay isbedelo cusub. Waxaan ka wada hadalnay mabda'a xulashada iyo xulashada qalabka kala sifeynta iyo qalabka kala soocida, waxaana u rajeynay isbeddelkeeda horumar Marka maxay yihiin tixraac xog ah oo ku saabsan sida loo doorto shaandhada warshadaha? Dad badan ayaan arintaan cadeyn, waxaanan ku faahfaahin doonaa hoos.
Horumarinta sii socota ee warshadaha ilaalinta deegaanka, dadku waxay leeyihiin shuruudo sare iyo sare oo loogu talagalay tikniyoolajiyada daaweynta biyaha, dhoobada, madaafiicda iyo tiknoolajiyada kale ee sifeynta, iyo baahida loo qabo miirayaasha warshadaha ayaa sidoo kale sii kordhaya. Sidaa darteed, xulashada miirayaasha warshadaha waxay ku yaalliin warshadaha qaarkood. Shirkaduhu si gaar ah ayey muhiim u yihiin. Shirkad ahaan, waxaa jira roobab farsamo qaarkood. Iyaga ka mid ah,
Qodobka ugu muhiimsan ee xulashada miirayaasha warshadaha ayaa ah in la buuxiyo shuruudaha macaamiisha, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha, si loola kulmo macaamilka farsamo iyo faa'iidooyinka alaab-qeybiyeyaasha. Hawlahan waxaa badanaa sameeya soo saarayaasha shaandhada warshadaha. , Laakiin inta badan sicirka waa la xaddidayaa, ma aha oo kaliya in macaamiisha la siiyo xalalka xulashada shaandhada warshadaha, xalalka baaritaanka badeecada, laakiin sidoo kale in laguu furo habka wax soo iibsiga adiga. Waxaa la dhihi karaa raasamaalka tiknoolajiyada iyo faa'iidooyinka alaab-qeybiyeyaasha ayaa ku filan inay ku siiyaan xalka ugu fiican Xalka si loo daboolo baahiyahaaga shaqsiyeed
Miiraha warshadaha oo leh qaab dhismeedka guud ee qalabka: Waxay ka kooban tahay sanduuq, shey shaandho dhowr qaybood ah, qalab dib-u-dhaqasho, sanduuqa kontaroolada korantada, hoos-u-dhige, waalka korontada, koontaroole cadaadis kala duwan, iwm. wuxuu u qaybiyaa daloolkiisa gudaha godadka sare iyo kan hoose, Waxaa jira waxyaabo badan oo shaandheeye ah oo ku jira daloolka sare si ay si buuxda ugu adeegsadaan booska shaandhada oo ay muujiyaan in cabirka shaandhada warshadaha uu hoos u dhacay. Daloolka hoose waxaa lagu qalabeeyaa koob wax lagu nuugo oo gadaal ah.
Inta lagu guda jiro hawsha shaqada ee shaandhada warshadaha, dareeraha cakiran wuxuu galaa daloolka hoose ee shaandhada iyada oo loo marayo marinka, ka dibna wuxuu galayaa daloolka hoose ee shaandhada iyada oo loo marayo godadka qaybta. Qeybta wasakhda qalabka faaqidaha badan ayaa la dhexgeliyaa, dareeraha saafiga ahna wuxuu soo dhex maraa farqiga si uu u gaaro daloolka sare, ugu dambeyntiina waxaa laga qaadaa meesha laga baxo. Miiraha warshadaha waa mid ka mid ah miirayaasha badan waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa birta, warshadaha kiimikada, batroolka, sameynta waraaqaha, daawada, cuntada, macdanta, iyo awoodda korantada. , Biyo gelinta magaalooyinka iyo beero kale. Sida biyaha wasakhda ah ee warshadaha, sifeynta biyaha wareegaya, dib u soo nooleynta emulsion, daaweynta sifeynta saliida qashinka, warshadaha macdanta macdanta biyaha biyaha foornada qarxa, nidaamka rogida kulul ee cadaadiska sare leh, iwm. qalabka sifeynta otomaatigga ah
HOREMiirayaasha qaboojiyaha waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan qodobbada wax ku oolka ah oo ay yeeshaan waxqabad sarreeya
NEXTMaxay yihiin astaamaha shaandhada koowaad, iyo sida loo nadiifiyo loona ilaaliyo maalin kasta